Guddiga qaban-qaabada doorashada guddoomiyaasha baarlamaanka oo maanta la dooran doonno – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddiga qaban-qaabada doorashada guddoomiyaasha baarlamaanka oo maanta la dooran doonno
Waxaa maanta lagu wadaa in xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliy ay doortaan guddiga qaban-qaabada doorashada guddoomiyaasha rasmiga ah ee baarlamaanka Soomaaliya.
Doorashadaasi kadib ayaa la filayaa in baarlamaanka Soomaaliya uu yeesho guddoomiye iyo labo guddoomiye ku-xigeen, kuwaas oo sii amba-qaadi doonna doorashadda madaxtinimadda Soomaaliya, taas oo lagu wado inay dhacdo bishaan January 2017-ka.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay kulan ay yeesheen waxay kaga doodeen lacago shardi looga dhigay murashixiinta u tartamaya guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Kulankooda ayaa waxay ku meel mariyeen soo jeedintii madaxda madasha qaran, oo aheyd in musharaxa madaxweyne uu bixiyo 30 kun oo dollar, halka musharixiinta guddoonka baarlamaanka labada Aqal ay iyagana bixiyaan 15 kun dollar.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka doortaan guddiga qaban-qaabada doorashada guddoomiyaasha rasmiga ah ee baarlamaanka labada Aqal, iyadoona lasii guddo gali doonno doorashada guddoomiyaasha iyo ku-xigeenadooda.